को-को अटाए मेस्सीको जर्सी संग्रहमा? | Hamro Khelkud
को-को अटाए मेस्सीको जर्सी संग्रहमा?
बुधबार, वैशाख २७, २०७४
एजेन्सी – विगत १४ वर्षदेखि बार्सिलोनाको लागि व्यवसायिक फुटबल खेलिरहेका लियोनल मेस्सीले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेको १३ वर्ष पुगिसक्यो। यसबीचमा मेस्सीले थुप्रै दिग्गज खेलाडीसंग विपक्षीका रुपमा पनि खेलिसकेका छन्। यहि क्रममा उनले खेलको समाप्तिसंगै थुप्रै खेलाडीहरुसंग जर्सी साटासाट पनि गरेका छन्।
केहि दिनअघि मेस्सीले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममार्फत आफ्नो जर्सी संग्रहको प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनीमा उनले फ्रान्सेस्को टोट्टी, डिएगो मिलिटो, फिलिप लाह्म, न्याय टुरे, सर्जियो अगुएरो लगायतका जर्सी राखेका छन्।
उनले रियल म्याड्रिडका इकार कासियास, राउल र एन्जल डी मारियाको जर्सी पनि राखेका छन्। तर, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको जर्सी भने उक्त संग्रहमा देख्न पाइएको छैन। उनले आफ्नो जमाना भन्दा अघि दिग्गज रहेका थिएरी हेनरी, पेट्र नेड्भेड, डेको लगायतका जर्सीलाई पनि संग्रहमा स्थान दिएका छन्।